Typesdị 4 nke SEM maka mkpọsa eCommerce | ECommerce ozi ọma
Typesdị 4 nke SEM mkpọsa maka eCommerce
Jose Ignacio | | eCommerce, Marketing, Ahịa ahia, SEM
Ma eleghị anya, ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa dijitalụ ị na-eche na ọ dị mkpa iji mepụta ụfọdụ mkpọsa SEM na-enyere aka na mpaghara ahụ. Mana nke mbụ ị kwesịrị ịma na okwu SEM na-ezo aka na acronym maka Search Engine Marketing na na ọ bụ mgbe anyị na-ekwu maka mkpọsa nyocha ngwa mgbasa ozi nyocha. Ọ bụ usoro a na-ahụkarị na azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị yana site na ebe ị ga-enweta uru akụ na ụba.
N'ihi na mkpọsa SEM na njedebe nke ụbọchị ga-enyere anyị aka ebuli visibiliti ma n'ezie, ịbawanye nnweta nke saịtị weebụ na ibe n'ihi omume ndị na-eme site na engines ọchụchọ. Nke a bụ ihe, n'aka nke ọzọ, bụ akụkụ nke ebumnuche gị mgbe ị na-eme ọrụ ọkachamara nke njirimara ndị a. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ị kwesịrị icheta site ugbu a gaa n'ihu na site na mgbasa ozi ndị a na-akwado na engines ndị ahụ (Google AdWords, Mgbasa ozi Bing ma ọ bụ Yahoo! Marketingzụ ahịa ahia) ị ga-anọ n'ọnọdụ ka mma ịkwọ ụgbọala dị mma na ebe nrụọrụ weebụ gị.
N'aka nke ọzọ, echefula na ọ ga-eme mkpọsa SEM maka eCommerce nwere ike iwetara gị ọtụtụ elele site ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, na ọ nwere ike ịsọ mpi n'ọnọdụ ka mma megide ụlọ ọrụ asọmpi. Dị ka ị ga-n'ịwa n'ime a nnọọ obere ohere nke oge a mma nloghachi na ego. Site na mkpọsa SEM dị iche iche maka eCommerce nke anyị ga-ekpughere gị n'okpuru ka ị nwee ike itinye ha n'ọrụ na enweghị oke nsogbu na ọnwa ndị na-abịanụ.
1 SEM mkpọsa: ịnata okporo ụzọ ndị ọzọ site na Google
2 Kwadebe mwepụta gị
3 Jiri otutu otu di iche iche
4 Mgbasa ozi na-echegharị
5 Campaignzụ ahịa
6 Ntughari na-eto na Spain site na 250%
SEM mkpọsa: ịnata okporo ụzọ ndị ọzọ site na Google
N'ezie, Google bụ otu n'ime igwe nyocha kachasị ike na mpaghara ahụ ugbu a yana dịka nke a ị kwesịrị iji ya mee ihe na gị uru azụmahịa. Site na usoro ezi uche a, ị nwere ike ịhọrọ mkpọsa kachasị mma nke na-egbo mkpa gị n'ezie na ọrụ ọkachamara gị. Site na ebe ịnọ nọ n'ọnọdụ iji zute ihe mgbaru ọsọ ndị a.
Ohere ahịa: site na omume ndị na-eme na arụmọrụ ndị a ebe ọ bụ na ntụgharị na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Trafficzọ okporo ụzọ weebụ: Ọ bụ ebumnuche ọzọ ị kwesịrị isetịpụ onwe gị site n'oge a site na ihe dị nfe dị ka ọ dị iji nweta ndị ọrụ ziri ezi ileta weebụsaịtị gị.
Ma n'aka nke ọzọ, ị ga-enwe ihe ndị dị mkpa ka ahịa gị wee baa uru yana nke ngwaahịa ma ọ bụ isiokwu ị na-ere ahịa. Ọ bụ, ka emechara, a pụrụ nnọọ iche atụmatụ na-iji na-ekwe ka ndị ọrụ na-achọpụta gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na a ọzọ kwenye n'ụzọ karịa na mbụ.
Kwadebe mwepụta gị
Usoro ahia ndị a, n'aka nke ọzọ, ga-enye gị ohere ịnọ n'ọnọdụ kachasị mma maka nkwadebe nke mkpọsa. online anaghị achọ oge dị ukwuu ma, na mgbakwunye, na-enye ohere mgbanwe na nkeji dịka mkpa ụlọ ọrụ mgbasa ozi si dị. Nwere uru dị ka nke anyị ga - edepụtara gị ugbu a:
Ọ na - ewepụta ezigbo ụda nke ndị mbido site na mbido na ihe dị mkpa karị, okporo ụzọ e kewara ekewa.
Nwere ike ịnwetakwu nleta na ihe n'ọnọdụ ndị a nwere ike ịba uru karịa, nke dị elu.
Mmetụta ikpeazụ bụ na ire ngwaahịa gị, ọrụ gị ma ọ bụ ihe gị ga-abawanye site na oge ahụ na enweghị nnukwu mbọ n'akụkụ gị.
N'ezie, ịnwekwara ike ịnweta ajụjụ nke njirisi niile. Ya mere na n'ụzọ dị otú a, ị nwere ike na-ebuli niile omume na na mma ịchịkwa ha.
Jiri otutu otu di iche iche
Ọ bụ usoro ọzọ nke anaghị adịkarị iji nweta ebumnuche gị na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị n'ịntanetị. Nke a bụ n'ihi na otu mgbasa ozi ndị ọzọ anyị kere, nke ka ukwuu nke mkpọsa anyị, ka ịdị ukwuu ga-adị ka mma nkewa. N'echiche a, ọ dị ezigbo mkpa ka ị mepụta ma kọwaa ha site na otu dị iche iche ebe enwere ndị ga-arụ ọrụ karịa ndị ọzọ na ọ bụ ndị ị ga-erite uru site ugbu a gaa n'ihu.
Otu aghụghọ ị nwere ike iji bụ ịga maka ndị na-adọta ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke clicks. Site na ogwe njikwa ha nwere ike ịchịkwa ha n'ụzọ dị mfe karịa karịa. Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ bara ezigbo uru na ị nwere ike ịtụkwasị obi na ahịrị ole na ole iji tinye aha, ederede na njikọ (URL) nke mgbasa ozi ahụ. Ọ bụ azịza ga - enyere gị aka melite ebumnuche ị setịpụrụ maka azụmahịa azụmaahịa gị.
Mgbasa ozi na-echegharị﻿
Ọ bụ atụmatụ pụrụ iche nke nwere ike inye mkpụrụ mbụ na azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị ma ọ bụ na opekata mpepe emepe ka ị tụrụ anya n'aka ha. Ọ bụghị n'efu, ọ bụrụ na ejiri ụdị ihe mara ụdị mkpọsa a, ọ bụ n'ihi na ha na-enye gị ohere igosi mgbasa ozi nye ndị ọrụ gara na weebụsaịtị gị n'ozuzu ma ọ bụ na ngalaba akọwapụtara. Mana ihe di iche na aghaghi iburu n'uche site ugbu a gawa na nke a bu na emeghi ihe ndi a dika anyi choro.
N'otu ụzọ, ọ bụ ohere nke abụọ ha na-enye gị iji kwalite ụdị ọrụ a. Ọ bụ usoro dabara adaba maka ụdị ndị mgbasa ozi niile chọrọ ịbawanye ahịa ha na ndị na-elekwasị anya ndị ahịa kachasị mma na-eji ngwaọrụ teknụzụ akọwapụtara iji rụọ ọrụ ha. Campaigndị mgbasa ozi abụọ nwere ike ịdị iche:
N'okwu a, ha na-eche maka ụlọ ọrụ ndị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmaahịa ma chọọ ịme mkpọsa ịzụ ahịa ka ị pụta na igwe nchọta kachasị mkpa n'ime ngalaba. Maka nke a, ọ dịghị mkpa n'okpuru akụkụ ọ bụla ị ga - etinye ndepụta nke Keywords n'ime mkpọsa mmemme ahụ, dịka ọ dị na usoro ndị ọzọ nwere ụdị njirimara na ụzọ ha.
N'ọnọdụ ọ bụla, klas nke azụmahịa mkpọsa a dị iche karịa ihe niile n'ihi na a na-eji ha ịbawanye ahịa na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị. Nakwa iji dọta ndị ọrụ ọhụụ nwere ike ịghọ ndị ahịa nwere ike ịmalite n'oge ahụ. N'ikpeazụ, ọ bụ ohere azụmaahịa nke mepere ndị na-ahụ maka azụmaahịa ndị a.
Ọ bụ ezie na ebumnuche bụ isi nke mkpọsa vidiyo bụ ịbawanye mmasị nke ndị ọrụ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị, yana iji jiri nwayọọ nwayọọ na-akwalite ihe ọmụma dị ukwuu nke akara azụmaahịa yana akara ngosi kwekọrọ na ya. Ọ bụ ebe a na-atụ aro ya iji mepụta ụdị dị iche iche nke ngwaahịa ọdịyo a iji kwado ndị ahịa na ndị ọrụ. Na njedebe nke ụbọchị otu n'ime ihe mgbaru ọsọ kachasị mkpa na azụmahịa eletrọniki, dịka egosiri na afọ ndị na-adịbeghị anya na ọnụ ọgụgụ ndị ngalaba ahụ gosipụtara n'oge a. Maka na ị nwere ike melite arụmọrụ nke azụmaahịa gị n'ịntanetị site n'ụdị ụzọ dị iche iche dị iche iche n'ụwa nke ịzụ ahịa dijitalụ.
Agbanyeghị na nchịkọta, ọ ga-adị oke mkpa na site na oge ndị a ị nwere ike ịkọwa ebumnuche nke mkpọsa gị. Ọ bụghị n'efu, dabere na ha, ịga nke ọma ma ọ bụ na nsonaazụ nke omume ndị a ga-adabere. Na esemokwu na ị ga-elebara anya site ugbu a gaa n'ihu, dị ka ezi uche dị na nghọta.
Ntughari na-eto na Spain site na 250%
Azụmahịa elektrọnik na Spain abụrụla oge dị mkpirikpi otu n'ime ngalaba azụmaahịa na-eme nke ọma n'ihi mmụba a na-apụghị igbochi ya na ọnụ ọgụgụ ahịa. N'echiche a, National Markets and Competition Commission (CNMC) na-agbakọ na ntụgharị nke ecommerce na mba anyị esiwo na 2.823 nde euro gaa 10.116 nde. Kedu na omume pụtara uto nke ihe ọ bụla na ihe ọ bụla na-erughị ihe karịrị 250% na ngụkọta nke afọ ise.
Mana ihe dị mkpa n'oge a, ọ bụghị naanị na ọ na-eto eto gbasara ntụgharị ya, mana n'ụzọ ọzọ, ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-etokwa na mba anyị. N'ime afọ ụtụtụ afọ gara aga, oke ihe a gbagburu ọnụ ọgụgụ dị ezigbo nso na ndị Spain 19 nde. Site n'igosi na ha zụtara ngwaahịa ha n'ịntanetị, nke pụtara na 18% ọzọ na-aga n'ihu ọnụọgụ afọ gara aga. Mana data dị ezigbo mkpa nke na-akwado ịrị elu nke azụmahịa kọmputa na oge a bụ na ịzụrụ ihe dị na kọntinent ochie karịrị, site na 12% ruo 11%.
Akụkọ ahụ e kwuru n'elu na-egosi na uto n'ahịa ịntanetị na mba anyị bụ ihe a na-ahụkarị n'ihe niile. Ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ ebe usoro a dị mkpa karị, dị ka ngalaba azụmaahịa ndị a: ejiji (50%), ịma mma na nlekọta onwe onye (41%) na teknụzụ na elektrọnik (39), dịka nke kachasị mkpa n'oge a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Typesdị 4 nke SEM mkpọsa maka eCommerce
Kedu oge kachasị ikpebi na azụmaahịa?
Omume 6 iji melite arụmọrụ nke azụmaahịa gị n'ịntanetị